जनता भुल्ने राजनीति- विचार - कान्तिपुर समाचार
सत्ता–शक्तिमा पुगेपछि जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने अहंकारी सोच नेतृत्वमा हावी हुने गरेको छ, जुन क्षम्य छैन ।
वैशाख २३, २०७८ दुर्गा कँडेल छत्कुली
राजनीति मूलतः जनसेवाको, राष्ट्रसेवाको विषय हो । राजनीतिकर्मीहरू सक्षम र योग्य भए जनताको मुहार फेरिँदै जान्छ । राजनीतिकर्मीहरूको आचरण शुद्ध रहे देश प्रगतितर्फ लम्किन्छ भने विकृत भए देश न जनता, कसैले पनि चैनको, शान्तिको सास फेर्न पाउँदैनन् ।
हाम्रो राजनीति धेरै समयदेखि यही बाटामा हिँडिरहेको छ, उल्टो बाटामा । भीरतिरको त्यो गति अहिले त झन् बढिरहेझैं लाग्छ । आफ्नो स्वार्थको परिपूर्तिलाई जनसेवा र राष्ट्रसेवा सम्झिनेहरूका हातमा गएको छ देशको लगाम । हाम्रो देशको राजनीति यति विकृत हुनुको कारणलाई बुँदागत रूपमा यसरी बुझ्न सकिन्छ ।
आजीवन व्यवसाय : राजनीतिलाई पेसा–व्यवसायका रूपमा लिने गरिएको छ । कमाउने धन्दा बनिसकेको छ राजनीति । कुनै पनि पेसा–व्यवसायमा उमेरको हद हुन्छ, निश्चित समयपछि मानिसले अवकाश लिन्छ, त्यसअघि उसले आफ्नो उत्तराधिकारी बनाइसकेको हुन्छ । तर हाम्रा राजनीतिकर्मीहरूमा यो कुरा लागू हुँदैन । आफू मृत्युशय्यामा पुग्दा पनि पदलोलुपता तिनले छाड्न सकेको देखिन्न । राजनीति एकातिर निवृत्त हुनुपर्ने पेसा रहेन, अर्कातिर सात पुस्तालाई पुग्ने कमाउने भाँडोका रूपमा स्थापित हुँदै गयो । नयाँ सोच, जोस–जाँगर भएकाहरूलाई अगाडि ल्याऔं र हामी पछाडिबाट सहयोग गरौं भन्ने भावना राजनीतिकर्मीहरूमा पाइँदैन । हरेक क्षेत्रमा परिवर्तन भयो, काम गर्ने तौरतरिका बदलिए, प्रणालीमा परिवर्तन भयो, सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन राजनीतिमा भयो तर नेतृत्वको कार्यशैलीमा परिवर्तन आउन सकेन ।
फोहोरी : राजनीति अत्यन्त फोहोरी खेल बनिसकेको छ । यहाँ जसले जे गरे पनि हुन्छ । साँचोलाई झुटो र झुटोलाई साँचो बनाउन सक्ने खेल बनेको छ राजनीति । स्वार्थका लागि जस्तोसुकै सम्झौता गर्न वा तोड्न सक्ने, अपराध गर्न सक्ने, आरोप–प्रत्यारोप लगाउन सक्नेहरू हर्ताकर्ता बनेका छन् । एकअर्कालाई नङ्ग्याउने, खुइल्याउने मानौं होडबाजी चलेको छ । आउने पिँढीले वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वबाट यस्तै कुरा सिक्ने हो ?
राजनीति र अपराधबीच पर्खाल नहुनु : राजनीति र अपराध फरक विषय हुन् । यी दुई विषयबीच निकै दूरी हुनुपर्छ । विडम्बना, आज हरेक घटना–परिघटना तथा अपराधलाई राजनीतीकरण गरिन्छ । चाहे यौन शोषण होस्, चाहे महिला हिंसा, चाहे दलितको हत्या वा चाहे भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू होऊन्, हरेक विषयमा राजनीति रङ पोत्ने गरिन्छ । यी दुई विषयबीच कुनै पर्खाल रहेन । त्यही भएर अपराधलाई राजनीतिले चोख्याइन्छ र राजनीतिलाई आपराधिक क्रियाकलापमा प्रयोग गर्न सजिलो भएको छ ।
महँगो : बजारमा सबै वस्तु तथा सेवाको मूल्य बढेको छ । प्रत्यक्ष रूपमा महँगीले दिन–प्रतिदिन सर्वसाधारणको जीवन असहज बन्दै गएको छ भने, अप्रत्यक्ष रूपमा राजनीतिमा भएको महँगीले अझ बढी प्रभाव पार्न थालेको देखिन्छ । हिजो निष्ठा, आदर्श, त्याग, सम्मान, समर्पणको राजनीति हुन्थ्यो । मानिसहरू अरूका लागि आफूलाई सिध्याउने गर्थे र तिनै गुण तथा विशेषताका आधारमा नेतृत्व चयन हुन्थ्यो । तर आज पैसा सबैभन्दा माथि पुगेको छ । उम्मेदवारीको टिकट किन्न पैसा चाहिन्छ, चुनावमा पैसाको खोलो बगाउनुपर्छ । चुनावताका विविध शीर्षकमा हुने खर्चले गर्दा राजनीति अत्यन्त महँगो भएको छ । पैसा हुने एउटै मान्छे भिन्नभिन्न दलमा नेतृत्वमा रहेका उदाहरणहरू त्यसैले पाइने गरेका हुन् । पैसा हुने तर अयोग्य मानिस नेतृत्वमा जान सक्ने र पैसा नहुने तर योग्य मानिस नेतृत्वमा जान नसक्ने परिस्थिति छ ।
अनैतिक : जनताको साथ र समर्थन लिएर पदीय जिम्मेवारीमा पुगेपछि राजनीतिकर्मीहरू जनताको मतलाई अवमूल्यन गर्दै पद र स्वार्थका लागि प्रयोग गर्ने गर्छन् । हरेक राजनीतिकर्मीले बोलेपिच्छे आमजनताको दुहाई दिइरहँदा व्यवहार भने स्वार्थी रहेको सबैले छर्लंग बुझिसकेका छन् । देश र जनताको जति अहित गरेको भए पनि पटकपटक जिम्मेवारी पाइरहने प्रवृत्ति नेपाली राजनीतिमा अब नौलो रहेन । राजनीतिकर्मीमा नैतिकता हराएकाले सबैजसो क्षेत्रमा अनैतिकताको बिगबिगी छ ।
मैमत्त : सत्ता–शक्तिमा पुगेपछि जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने अहंकारी सोच नेतृत्वमा हावी हुने गरेको छ, जुन क्षम्य छैन । नेतृत्वले आफूलाई संविधानभन्दा माथि सम्झने प्रवृत्ति नत्यागेसम्म देश समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढ्न सक्दैन ।
अन्त्यमा, नेपाली जनता अब त शान्तिको सास फेर्न पाइन्छ भन्दै हरेक आन्दोलनमा होमिँदै आएका हुन् । त्यस क्रममा कतिले ज्यान गुमाए, कतिले परिवार गुमाए, कति आजीवन अपांग भए । हरेक आन्दोलनपछि राजनीतिकर्मीहरूले भने, ‘राजनीतिक क्रान्ति समाप्त भयो । अब आर्थिक क्रान्ति गर्ने हो ।’ तर, त्यो आर्थिक क्रान्ति उनीहरूकै लागि मात्र भयो, न कि आम जनताका लागि । जुनै दल सत्तामा पुगे पनि राम्राले भन्दा हाम्राले स्थान पाइरहँदा, ‘पहुँचवालालाई अवसर, क्षमतावान्लाई पर सर’ को वातावरण रहिरहँदा आम जनतामा निराशा छाई नै रह्यो ।
अहिले देश कोरोना–संकटमा छ, युवा शक्ति देशबाहिर छ, लगानी गर्ने वातावरण बन्न सकेको छैन, बेरोजगारी व्याप्त छ, व्यापार घाटा दिनहुँ चुलिँदो छ, कृषियोग्य जमिन बाँझै रहेको वा खण्डीकरण भएको छ, मानिसमा परिश्रम गर्ने बानी हराउँदै गएको छ । अर्थलोलुप, पदलोलुप, आफूलाई अजम्बरी सम्झिने व्यक्तिहरूले राजनीतिको लगाम समाएका छन्, जसका कारण नेपाली जनताका दुर्दिन चाँडै सकिने छाँट छैन । सत्य के हो भने, राजनीति यही हिसाबले अघि बढिरहे देश पछिपछि सर्दै गइरहनेछ ।
प्रकाशित : वैशाख २३, २०७८ ०७:५९
फाल्गुन २५, २०७७ दुर्गा कँडेल छत्कुली
नेपालको संविधान २०७२ जारी भइसकेपछि राजनीतिक क्रान्तिको चक्र पूरा भयो, अब आर्थिक क्रान्ति गर्नुपर्छ भन्ने भाषण नेताहरूले धेरै गरे । संघीय शासन प्रणालीलाई मजबुत बनाएर आर्थिक क्रान्तिका लागि स्थिर सरकार भन्दै एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर चुनाव लडे । झन्डै दुईतिहाइ बहुमतको सरकार पनि बन्यो । पछि दुवै पार्टीको एकता भएर बन्यो— नेकपा ।
अब केही भई पो हाल्छ भन्ने आशा त्यतिखेर जनतामा जागेको थियो । तर, एकीकरण भइसके पछिको छ महिना पनि नपुग्दै नेकपामा खिचातानी सुरु हुन थाल्यो । अहिले तीन वर्ष पार गर्दैगर्दा एकता यसरी गर्ल्याम्म ढल्यो । अब कुनै पार्टीले दुईतिहाइ नजिकको बहुमत सायदै पाउँछ । त्यस्तो राजनीतिक स्थिरता देशले फेरि पाउन गाह्रो छ ।
कुनै राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूको व्यक्तिगत स्वार्थका कारण समग्र देश अन्योलतर्फ धकेलिनु राम्रो होइन । देश र जनतालाई राजनीतिक पार्टी विशेषको सिकार बनाउने परिपाटीको अन्त्य हुनु जरुरी छ । आजको दिनमा राजनीति व्यवसायमा परिणत भएको छ । जहाँ छिटोभन्दा छिटो पद, पैसा, पावर आर्जन गर्न जस्तोसुकै हर्कत गर्न पनि पछि परिँदैन । राजनीतिको भर्‍याङ चढेर पदमा पुग्ने अनि भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुब्दासमेत कारबाहीको भागी हुनु नपर्ने परिपाटी मानौं संस्थागत भइसकेको छ । हिजो गाउँबाट चप्पल पड्काउँदै हिँडेका ठुल्दाइहरू राजनीति गरेकै भरमा आलिसान महलमा मार्सीको भुजा र बँदेलको मासु ज्यूनार गरिसिन्छ । तर ठुल्दाइहरूको सम्पत्ति विवरण सर्वाजनिक हुँदा तिनले साँच्चिकै ती सर्वहारा जनताको सेवाका लागि राजनीति गरिरहेका छन् त भन्ने आशंका उत्पन्न हुन्छ ।
पदका लागि मरिहत्ते गर्ने, गुट र उपगुट खडा गरी राजनीति गर्ने, राम्राभन्दा हाम्राको संरक्षण गर्ने, स्वार्थका लागि जस्तासुकै आत्मघाती सम्झौताहरू गर्न पनि पछि नपर्ने, सधैं शक्तिकेन्द्रमा बस्न खिचातानी गरिरहने, पदीय स्वार्थका लागि आफ्नै समूहका साथीहरूलाई विश्वास नगर्नेजस्ता विशेषता हाम्रा नेताहरूमा पाइन्छ । नेताहरूले व्यक्तिगत स्वार्थका लागि राजनीति गर्दा देश अस्थिरतातर्फ उन्मुख छ । एकअर्कालाई नंग्याउने, खुइल्याउने होडबाजी चलेको छ । पदीय मर्यादा बिर्सेर मुखमा आएजति सबै गाली नेताहरूले एकअर्कालाई गर्छन् । के यस्तै राजनीतिक संस्कारले नयाँ पुस्तालाई सही बाटो देखाउला ? हामीले आउँदो पिँढीलाई राजनीति यस्तै गालीगलोज मात्रै हो भनेर सिकाउने हो ? राजनीतिक नेतृत्व वर्ग यस्ता प्रश्नमा गम्भीर हुनुपर्छ । अन्य क्षेत्रका अगुवाहरूले आफ्ना उत्तराधिकारी आफू क्रियाशील रहेकै समयमा बनाउँछन् । विडम्बना, राजनीतिमा शीर्ष नेताहरू मृत्युशय्यामा पुगेपछि मात्र उनीहरूले ओगटेका पद खाली हुन्छन् । अन्य पेसा/क्षेत्रमा निश्चित समय वा उमेरपछि अवकाश पाइन्छ तर नेपाली राजनीतिको शब्दकोशमा मानौं ‘अवकाश’, ‘निवृत्त’ जस्ता शब्द नै छैनन् ।
स्वार्थ मिल्दा विचार र आदर्शलाई तिलाञ्जली दिई जुट्ने अनि नमिल्दा एउटै सिद्धान्त बोक्छौं भनिरहँदा पनि फुट्ने प्रवृत्ति नेपाली राजनीतिमा नौलो होइन । तर यसपालिको नेकपाको फुटले संविधान र प्रणालीलाई नै असर गर्‍यो । नेकपाका दुई समूहले केहीअघि सडकमा सोझासाझा जनतालाई झुक्याएर ल्याए । गाउँगाउँबाट गाडीका गाडी सोझा नागरिकलाई मासु–भात र पैसाको लोभ देखाई राजधानीका सडक अस्तव्यस्त बनाइयो । केका लागि त्यसो गरियो भन्ने जवाफ कसैले दिएनन् । यस्ता सडक प्रदर्शनले सर्वसाधारणले निकै सास्ती बेहोर्नुपर्‍यो । यसको जिम्मेवारी कसले लिन्छ ?
ज्याला–मजदुरी गर्ने वर्गलाई भोकै राखी राजनीति कसरी हुन्छ ? आफूचाहिँ मार्सीको भुजा ज्युनार गरी झुसिलो डकार्दै मञ्चमा अरूलाई खुइल्याउने अनि जनताले चाहिँ दुई छाक खान पनि कष्ट ब्यहोर्नुपर्ने ? मजदुरले बगाएको पसिनाले देश चलेको छ, नेताहरू चलेका छन् । तिनै मजदुरको चुल्हो बल्न नदिएर राजनीति हुन्छ ? सडकमा जनता बटुलेर एकअर्कालाई गाली गर्दा नेताहरूलाई क्षणिक आनन्द त मिल्ला तर तिनले जनताको मनमा ठाउँ पाउँदैनन् । प्रदर्शनको होडबाजीले कसैलाई पनि राम्रो गर्दैन ।
राजनीतिज्ञले पद र स्वार्थका लागि जनमतको अवमूल्यन गर्ने, आफ्नो अधिकार दुरुपयोग गर्ने गर्नु हुन्न । जनताको समर्थन प्राप्त गरेर नेता बनेकाहरूले समाजको, जनताको हित हुने काम गर्नुपर्छ । अहिलेको अन्योलग्रस्त परिस्थितिलाई नेताहरू मिलेर छिटोभन्दा छिटो निकास दिनु जरुरी छ । जिम्मेवार नेता र दलहरूले सचेत भई आफ्नो साख जोगाउने समय पनि यही हो । राजनीतिज्ञहरूले आफ्नो होइन, देशको स्वार्थलाई अगाडि राख्नुपर्छ ।
प्रकाशित : फाल्गुन २५, २०७७ ०८:३८